भ्वाइस अफ नेपाल विवादः निर्देशकलाई अमेरिकाबाट फिरोजको खुलापत्र (मैले पैसा पाउने कि नपाउने? |
भ्वाइस अफ नेपाल विवादः निर्देशकलाई अमेरिकाबाट फिरोजको खुलापत्र (मैले पैसा पाउने कि नपाउने?
On: २०७६ असार १४ गते, शनिबार, ०३:३० बजे प्रकाशित
काठमाडौं । गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’मा दुई कोच परिवर्तन भएसँगै सुरु भएको विवादमा पारिश्रमिकको मुद्दा पनि मिसिएको छ। पाँच दिनअघि भ्वाइस अफ नेपाल पहिलो सिजनका सहायक निर्देशक एवं आइटी हेड फिरोज तिमल्सिनाले आफूले अहिलेसम्म पारिश्रमिक नपाएको फेसबुकमार्फत गुनासो गरेका थिए।
पौडेलको यस्तो प्रतिक्रियाबारेको समाचार नेपाल लाइभमा पढेपछि फिरोज झन् रिसाए। उनले फेसबुकमा निर्देशक पौडेललाई लामो खुलापत्र नै लेखेर आफूले पाँच लाख परिश्रमिक पाउनुपर्ने विषय सम्झाएका छन्। फिरोजले निर्देशक पौडेलसँग गरेको च्याट संवादको स्क्रिनसट पनि राखेका छन्। त्यो हेर्दा फिरोजले पाउनुपर्ने रकमबारे निर्देशक पौडेल जानकार रहेको देखिन्छ। तर हामीसँगको कुराकानीमा पौडेलले आफू प्रस्ट नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
पढेको थिएँ, अन्याय गर्नेभन्दा सहनेलाई बढी पाप लाग्छ। त्यसैले आफूमाथि चरितार्थ गर्न चाहिनँ। हिलोमा ढुंगा हान्दा छिट्टा आफैलाई लाग्छ भन्ने उखान जहीँतहीँ लागू गरेर पनि नहुने रहेछ। कुरा सुरुबाटै गर्न मन लाग्यो। जब हामी ४ जनाको सहमतिमा सबै जना सेयरमा बसेर काम गर्ने मौखिक सहमति भएको कुरालाई पनि अस्विकार गर्नुहुन्छ भने त म यहाँ लेख्न नै छोडिदिन्छु। त्यसपश्चात् त्यो सम्झौता कहिल्यै लिगल पेपरमा परिणत भएन र अन्ततः मैले भ्वाइस अनि एएनसी छोड्ने निर्णय गरेँ। किनकि म एक्लो परेँ त्यो बखत।
त्यसपछि मेरो तलब १५ लाख बराबरको निस्कियो जसमध्ये प्रल्हादजी मार्फत दुई किस्तामा ५–५ लाख प्राप्त गरेँ। अन्तिम किस्ता म यूएस उड्ने दिनमा थियो। मैले एएनसीका लागि लिएको ऋण एक लाख ४० हजार पनि बल्लबल्ल अन्तिम घडीमा प्राप्त गरेँ। बाँकीको ५ लाख समयसँग तपाईंले बिर्सिनुभो जस्तो लाग्यो ‘नेपाल लाइभ’मा तपाईंको जवाफ पढ्दा। यो खुल्ला पत्र तपाईंलाई त्यही बाँकी रकम याद दिलाउन लेखिराखेको छु।
२०७६ असार १४ गते, शनिबार, ०३:३० बजे प्रकाशित